Mayelana NATHI | I-Xuzhou Hoyer Glass Technology Co, Ltd.
IHoyer Glass yisifushaniso sokubambisana kwaphezulu, kusukela emazwini ethu amaklayenti uMichael. Ingilazi yeHoyer ibambe iqhaza kakhulu ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ekwakheni, ekwakheni, ekuthengiseni nakuzo zonke izinhlobo zokufakwa kwengilazi ephezulu. Njengomdlali ohamba phambili nomgijimi ophambili embonini ye-glassware yaseChina, Manje, sisebenza ngochungechunge lwe-11 lwezingilazi zezinkulungwane zezinhlobo, njengamabhodlela wezimonyo, amabhodlela okuphuza, izimbiza zengilazi, amabhodlela oju, amabhodlela wejamu, iziqukathi zokudla, amabhodlela ophuzo , amabhodlela emithi, abaxubanisi bejusi, izitsha zokuqhekeza amaqanda, amapuleti wezithelo, izinkomishi, i-tableware neminye imikhiqizo ehlobene.
Ingilazi yeHoyer inemigqa yemihlangano engama-30 futhi umphumela wokukhiqiza wonyaka ungafika ezingcebeni eziyizigidi ezingama-300 (amathani angama-150,000). Sinezinkundla zokusebenzela ezi-6 ezisebenza ngokujulile ezikwazi ukunikela ngefrosting, ukuphrinta uphawu, ukuphrinta okufafaza, ukuphrinta isikrini, ukuqopha, ukuqopha, ukusika ukuthola izinsiza "zokugcina isitolo" esisodwa kuwe.
Imikhiqizo yethu iye yaqinisekiswa yi-SGS, i-CE, i-GE, i-ISO njll futhi bathokozela ukuthandwa okukhulu emakethe yomhlaba. Imikhiqizo yethu ihanjiswe emazweni angaphezu kuka-30 ezifundeni nasezifundeni, njenge-USA, Australia, Hong Kong, Africa, Europe, Southeast Asia, Middle East nokunye.
Ukwaneliseka kwamakhasimende, imikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nensiza elula njalo kuyimisebenzi yenkampani yethu. Samukela ngemfudumalo abangane basekhaya nabaphesheya ukuvakashela ifektri yethu. Ngethimba lethu lochwepheshe, elinomthwalo wemfanelo, onamandla futhi onolwazi, sikholwa ukuthi insizakalo yethu iyakwazi ukusiza ibhizinisi lakho ukukhula ngokuqhubekayo nathi.